Flash Video sameeyey, Si fudud samayso mid kuu gaar Flash Video
> Resource > Video > Sida loo abuuro Video Flash ah
Maalmahan, waxay u muuqataa mid aad caan u ah oo ku saabsan internetka Flash video. Mid ka mid ah sababaha waayo, kanu waa sababta oo ah goobaha sida YouTube, vimeo, Hulu, Facebook, iwm sameeyo video wadaago wax quruxsan fudud. Sidoo kale rabnaa in la abuuro flash video ah inay geliyaan YouTube ama website adiga kuu gaar ah? Waxaad u baahan tahay oo kaliya this software qoraalka Flash: Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ).
Waxa arrintan flash gaarka ah video abuuray? Marka hore, waxa ka mid ah oo dhan video aasaasiga ah itusi aad u baahan doontaa: goo, Dalag, isku beddesha, Goo iyo Jinka, Split, Record Voiceover, Ciidamada video jir, dar music asalka, iyo aad u badan. Marka laga soo tago in, waxay bixisaa 300+ gaar ah filtarrada, kala guurka, horyaal, Intro / credit, animations inaad qaadato video heerka ku xiga. Ugu dambayn, marka aad dhammaysid samaynta flash video ah, si fudud u dhoofin in a FLV qaab caadiga ah in ay la jaan qaada dhammaan goobaha, ama u geliyaan in ay si toos ah uga YouTube app this. La yaabka leh, miyaanay ahayn? Isku day lacag la'aan ah hadda.
Burcad this video flash abuure oo guji "16: 9" ama "4: 3" si ay u bilaabaan mashruuc cusub. Markaad u timaadaan inaad suuqa kala aasaasiga ah, guji "Import" xitaa folder file iyo dar dhammaan faylasha u baahan tahay si ay u abuuraan flash video ah.
Dhammaan files keeno tusi doonaa sida thumbnails in User ee Album. Tan iyo ku dhowaad dhammaan video caan ah, audio iyo sawiro la taageero, aanad u baahnayn in la sameeyo beddelaad wax ka hor, sidaas dhali tayada waayi maayo.
2 Abaabulaan aad video clips ku Timeline
Hadda iyaga jiidin Timeline video / audio ah siday u kala horreeyaan. Marka ay yimaadaan meel, ka hor tagaan flash qaadashada fudud isticmaalaya guddi Timeline iyo tafatirka ah. Halkan, waxaad:
Beddesha, goo, Dalag, Split, Iska yaree, dhaji aad videos si uu si fiican u habaysan.
Fine-habayn dhalaalka, ka duwan, ciyaaro xawaaraha, mugga audio, garoonka, dhigay ka baxeysa ee audio ee / libdhi baxay saamayn.
Kordhi qardhaasaha, iyada oo codsanaya sheeegateen oo muuqaal filtarrada, kala guurka, koobab, iyo intros / credits.
3 video tafatirka Advanced si turxaan-aad video
Full video mooshin ee Flash waa wax qurux badan, waana sahlan tahay in la gaaro arrintan flash video gaare. Riix PIP tab kor ku xusan Jadwalka iyo jiidi aad template PIP jecel sida Dhalashada, ubaxa, Gitaarka, iwm si Timeline PIP ah. Markaasaa waxaa u muujiyo, marka tilmaame markii ugu muuqataa, jiita in dhererka aad jeclaaday inuu taam u video ah. Sidoo kale, xaq waxa aad riixi kartaa dooro "Advanced Edit" si ay u helaan "PIP Edit" window. Halkan, waxaad sameyn kartaa mooshinka, qabsato maaskarada iyo saamaynta sida aad jeceshahay.
4 wadaag flash video
Marka aad dhamaysato flash video tafatirka, guji "Abuur" si ay u helaan suuqa kala saarka. Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) tashiilo waqtiga si aad u si toos ah u geliyaan in YouTube, Facebook si aad ula wadaagto saaxiibadaa iyo qoyskaaga. Haddii aad rabto in aad ku beegtid video daawadayaasha target in xidhiidh internet gaabis ah, waxaad badbaadin kartaa video FLV / Jabbuuti oo ah, ka dibna sii astaysto koobin ay tahay in la abuuro size yar oo heer sare Tifaftirayaasha video.
Iyo wixii soo baxayey Qaabka MPEG Streamclip